မလေးရှားရှိ အလှအပရေးရာ ကုထုံးများ – ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်များ
အရေပြားအခြေအနေနှင့် အနာအဆာများသည် ဘဝ၏ အရေးပါသည် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ အသက်ကြီးလာခြင်းသည် ဘဝ၏ ရှောင်လွှဲမရသော အရာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး အတွန့်ကြောင်းနှင့် အရေးအကြောင်းများသည် နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို ပူပန်စေသော အကြောင်းရင်းတစ်ရပ် ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ ဝမ်းဗိုက်ရှိ ပို၍ ခက်ခဲစေသည့်အရာတစ်ခုမှာ အမျိုးသမီးများ မီးဖွားပြီးနောက် ရရှိလာသော တိုက်ပွဲဝင်အမာရွတ်များနှင့် ဟိုမုန်းပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ထင်ကျန်နေသော အမည်းကွက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ခွဲစိတ်မှုမှ ကျန်ရစ်သည် အနာရွတ်များ၊ အပူလောင်နာများနှင့် ကီးလွိုက်အရွတ်များ အစရှိသည့် ထိခိုက်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အနာအဆာများလည်း ရှိပါသည်။
အလှအပရေးရာ ကုထုံးများသည် အလှအပေရေးရာ ပြောင်းလဲမှုများမှတစ်ဆင့် အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သော မပျောက်တော့သည့် အနာအဆာများကို ကုသပေးခြင်းဖြင့် လူတစ်ဦး၏ ဘဝအရည်အသွေးကို တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အထူးကုပညာရပ်ခွဲတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးပညာနယ်ပယ်တွင် အလှအပရေးရာသည် ရိုးရှင်းသော အလှအပေရေးရာ ကုထုံးများမှသည် အရေးပြားရောဂါကုပညာအထိနှင့် ၎င်းတို့ကြားထဲရှိ အရာရာတိုင်း ပါဝင်သော ကျယ်ပြန့်သည့် ကုသမှုများကို လွှမ်းခြုံပါဝင်ပါသည်။
သင်သည် အလှအပရေးရာ ကုထုံးများကို အဘယ်ကြောင့် ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်သနည်း။
သင်သည် အကောင်းဆုံးအနေအထားတွင် ရှိသောအခါတွင် ယုံကြည်စိတ်ချမှု အပြည့်ရှိသည်မှ မငြင်းနိုင်ပါ။ ထိုအရေပြားအခြေအနေနှင့် အနာအဆာအများစုသည် အစဉ်အမြဲ ကျန်ရစ်နေပြီး သင်၏ သင့်ကိုယ်သင် တန်ဖိုးထားခြင်းကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေပါသည်။​ အလှအပရေးရာ ကုထုံးများသည် ပေါ်ထွန်းလာသောအခါ ၎င်းတို့အားလုံးသည် ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ အလှအပရေးရာ ကုထုံးများသည် သင် တစ်ချိန်က ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်များကို ပြန်လည်ရရှိအောင် ကူညီပေးရုံသာမက သင့်ဘဝအတွက် တန်ဖိုးများကိုပါ ပေါင်းထည့်ပေးပါသည် – ၎င်း၏ ရလဒ်များသည်လည်း ဘဝသက်တာ ရှည်ကြာလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်အခါမှ မှေးမှိန်သွားမည်မဟုတ်သော အသစ်တွေ့ရှိခဲ့ရသည့် ယုံကြည်မှုများကိုလည်း ပေးစွမ်းပါသည်။
အလှအပရေးရာ ကုထုံးများမှ ဘာကို မျှော်လင့်သနည်း။
အလှအပရေးရာ ကုထုံးများတွင် ခွဲစိတ်မှုနှင့် ခွဲစိတ်မှုမလိုသော ပရိုစီဂျာ နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ရှုပ်ထွေးမှုအနေဖြင့် ကွဲပြားနေချိန်တွင် – ၎င်းတို့နှစ်မျိုးလုံးသည် ရှေ့ဆက်မလုပ်ဆောင်ခင်တွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ အစီအစဉ်ချခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းတို့ ပမာဏတူညီစွာ လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အနည်းငယ် သွားလိုက် ပြန်လိုက် ဖြစ်ရန်လည်း မျှော်လင့်ထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်ဆရာဝန်များအရ သင်သည် ပြန်လည်ကောင်းမွန်ရန် အချိန်ကာလအတိုင်းအတာ တစ်ရပ်အထိ အိမ်တွင် နေထိုင်ရန် သင့်ကိုယ်သင် ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါသည်။ အလှအပရေးရာ ပရိုစီဂျာအများစုသည် သင်၏ လှုပ်ရှားမှုကို လျော့ချခြင်း သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေလိမ့်မည် မဟုတ်သော်လည်း သင်သည် ဟိုနေရာ ဒီနေရာ သွားချိန်တွင် သင်၏ အလှအပရေးရာ ကုထုံးကို ရယူပြီးနောက် ရရှိလာသော ထိခိုက်မှုများကို ဖုံးကွယ်ရန် နှာခေါင်းစည်း၊​ နေကာမျက်မှန်များ သို့မဟုတ် တူညီသော ကိရိယာများကို သင့်အနေဖြင့် တပ်ဆင် လိုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် အနည်းငယ် အဆင်မပြေ၊ သက်သောင့်သက်သာ မရှိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။​ အနည်းငယ် စိတ်ရှည်ပါက သင်သည် အလွန်လျင်မြန်စွာ အတွင်းအပြင် အံ့ဖွယ်များကို တွေ့ကြုံခံစားရပါလိမ့်မည်။
မလေးရှားရှိ အလှအပရေးရာ ကုထုံးများ
အောက်ပါတို့သည် မလေးရှား၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်ဆရာဝန်များမှ အထူးကျွမ်းကျင်သော အလှအပရေးရာ နည်းနာများထဲမှ အချို့ ဖြစ်ပါသည် –
i. အလှအပရေးရာ အရေပြားရောဂါကုပညာ
အလှအပရေးရာ အရေပြားရောဂါကုပညာသည် သင်၏ အသားအရေအရောင်၊ ရေဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်း၊ အရွယ်မတိုင်မီ အရေပြား အိုမင်းခြင်းနှင့် အမျိုးမျိုးသော အရေပြား အခြေအနေများသည် အလှအပရေးရာ အရေပြားရောဂါကုထုံးများမှ ဖြေရှင်းပေးနိုင်သော ပြဿနာများထဲမှ အချို့ဖြစ်ပါသည်။ မလေးရှားတွင် အလွန် လုပ်ဆောင်လိုကြသော ကုထုံးများမှာ မျက်နှာဖြည့်ခြင်း၊ အရေပြားဖြည့်ခြင်း (ဟိုက်ရာလူရိုနစ်အက်ဆစ်) နှင့် ဘိုတောက်ကဲ့သို့သော ထိုးဆေးများနှင့် ဝက်ခြံနှင့် အရွယ်မတိုင်မီ အရေပြား အိုမင်းခြင်းအတွက် လေဆာကုထုံးများ ပါဝ၍်ပါသည်။
ii. ပြန်လည်တည်ဆောက်သည့် ခွဲစိတ်ကုသမှု
အလှအပရေးရာ ဆေးပညာနယ်ပယ်တွင် ပြန်လည်တည်ဆောက်သည့် ခွဲစိတ်ကုသမှုကို ထိခိုက်မှု၊ အမျိုးမျိုးသော အဓိက ခွဲစိတ်ကုသမှုအမျိုးအစားများနှင့် အခြားအရာများကြောင့် အလှအပဆိုင်ရာ ထိခိုက်ခဲ့သော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို ကုသရန် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ များစွာသော ပြန်လည်တည်ဆောက်သည့် ခွဲစိတ်ကုသမှုအမျိုးအစားများအနက် မလေးရှား အလှအပရေးရာ ပညာရှင်များသည် ရင်သားပြန်လည်တည်ဆောက် ခွဲစိတ်ကုသမှု အထူးသဖြင့် ရင်သားဖြတ်တောက်ကုသမှုကို ခံယူထားသော လူနာများအတွက် လူသိများ ထင်ရှားပါသည်။
iii. ပလပ်စတစ် ခွဲစိတ်ကုသမှု
ပလပ်စတစ် ခွဲစိတ်ကုသမှုများကို လူ့ခန္ဓာကိုယ်အား ပြန်လည် ရရှိစေရန်၊ ပြန်လည် တည်ဆောက်ရန် သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲရန် လုပ်ဆောင်ပြီး ရိုးရှင်း၊ အလယ်အလတ်ရှုပ်ထွေးနှင့် ရှုပ်ထွေးသည့် ပရိုစီဂျာများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။​ နှုတ်ခမ်းကွဲနှင့် အာခေါင်ကွဲ အစရှိသဖြင့် ပလပ်စတစ် ခွဲစိတ်ကုသမှုကသာလျှင် ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့် အချို့သော အခြေအနေများ ရှိပါသည်။ မလေးရှား၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်ဆရာဝန်များသည် ထိုသို့သော အနေအထားများကိုသာမက အမာရွတ်ဖျောက်ခြင်းနှင့် အကျိတ်အခဲဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်နှင့် မျက်နှာ အရေပြားတင်းခြင်းကဲ့သို့သော ပိုမို ရိုးရှင်းသည့် ပရိုစီဂျာများတွင်လည်း အထူးကျွမ်းကျင်ကြပါသည်။
iv. ခံတွင်းနှင့် မေးရိုး ခွဲစိတ်ကုသမှု
ဤခွဲစိတ်အထူးကုပညာသည် မျက်နှာ၊ ခံတွင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့် လည်ပင်း၊ ပါးစပ်နှင့် မေးရိုး ပြန်လည်တည်ဆောက်မှု ခွဲစိတ်ကုသခြင်းနှင့်အတူ မျက်နှာ အလှအပ ကုထုံးများအပေါ်တွင် အထူးပြုပါသည်။ ၎င်းသည် ကျယ်ပြန့်သော ရောဂါများနှင့် ထိခိုက်မှုများကို ကုသပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် နေထိုင်သူများသည် သွားတံတား၊ သွားတု၊ သွားစိုက်ခြင်းကဲ့သို့သော အလှအပရေးရာ ကုထုံးများနှင့် သွားဖြူခြင်း၊ ကြေးချွတ်ခြင်းနှင့် ပေါ်လစ်တင်ခြင်းကဲ့သို့သော ပိုမို ရိုးရှင်းသည် အလှအပရေးရာ ပရိုစီဂျာများကို လုပ်ဆောင်ရန် လာရောက်ကြပါသည်။
v. LASIK ခွဲစိတ်ကုသမှု
လေဆာအကူအညီဖြင့် မူလနေရာ မျက်ကြည်လွှာ ပြန်လည်ပုံဖော်ခြင်း (LASIK) ခွဲစိတ်ကုသမှုကို အဝေးမှုန်ခြင်း (အနီးမြင်ခြင်း)၊ အနီးမှုန် (အဝေးမြင်ခြင်း) နှင့် အမြင်အာရုံချွတ်ယွင်းခြင်းတို့အား ကုသရန် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ၎င်းသည် မျက်လုံးအတွင်းသို့ အလင်း တစ်ဖန် ဝင်ရောက်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပေးရန် မျက်ကြည်လွှာကို ပြန်လည်ပုံဖော်ခြင်းမှတစ်ဆင့် အထက်ပါအခြေအနေများကို ကုသပါသည်။ သို့သော်လည်း သင်၏ မျက်ကြည်လွှာသည် LASIK ခွဲစိတ်ကုပညာကို သင့်အား လုပ်ဆောင်ပေးရန် လုံလောက်သော အထူ ရှိရပါသည်။​ ထို့ကြောင့် ရှေ့မဆက်ခင်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်ဆရာဝန်များနှင့် ဆွေးနွေးပါ။
မလေးရှားသည် အတွေ့အကြုံရင့်သော အလှအပရေးရာ ပညာရှင်များ၊​ ပလပ်စတစ်နှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး ခွဲစိတ်အထူးကုများကို စုစည်းထားပါသည်။​ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီတိုင်းသည် လုံလောက်သော အတွေ့အကြုံရှိပြီး မလေးရှား ဆေးပညာကောင်စီ (MMC)၊ နှစ်စဉ် လုပ်ငန်း အသိအမှတ်ပြုလွှာ (ACP) နှင့် ကျင့်သုံးရန် လိုင်စင်နှင့် အရည်အချင်း (LCP) မှ ကုသရန် ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
အချို့သော အလှအပရေးရာ ပရိုစီဂျာများသည် အခြားထက် ပိုမို ရှုပ်ထွေးပါသည်။ အကြိမ်များစွာ လာရောက်ရန် လိုအပ်ပါက သင် လည်ပတ်နေချိန်တွင် အာရှတိုက်၏ ယဉ်ကျေးမှု အမျိုးအစားစုံလင်မှုမှ ပေးစွမ်းနိုင်သော အရာရာတိုင်းကို သင့်အနေဖြင့် အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်ခံစားနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်ဆရာဝန်များသည် ထူးကဲအံ့သြဖွယ်သို့ သင်၏ အလည်အပတ်သွားခရီးတွင် ကူညီရန် အဆင်သင့်ဖြစ်သည်ထက်ပင် ပိုနေပါသည်။ မလေးရှားရှိ အလှအပရေးရာ ကုထုံးများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို သိရှိလိုပါက ယခုပင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
အလှအပရေးရာ ဆေးပညာနေရာဌာနများကို ရှာဖွေပါ